Banijya News | » माघ महिनामा ११ अर्ब बढी बीमा शुल्क संकलन, कुन कम्पनीको कति ? माघ महिनामा ११ अर्ब बढी बीमा शुल्क संकलन, कुन कम्पनीको कति ? – Banijya News
माघ महिनामा ११ अर्ब बढी बीमा शुल्क संकलन, कुन कम्पनीको कति ?
११ फाल्गुन २०७७
फागुन ११, काठमाडौं ।
चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनामा जीवन बीमा कम्पनीले ११ अर्ब ४ करोड रुपैंया बराबरको कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीले उक्त बीमा शुल्क संकलन गरेका हुन् । बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको ७ महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ७४ अर्ब ५५ करोड बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।
१९ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये नेपाल जीवन बीमा कम्पनीले कम्पनीले माघ महिना मात्र ३ अर्ब बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । माघ मसान्तसम्म उक्त कम्पनीको बीमा शुल्क संकलन २० अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । यस्तै, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले माघ महिना १ अर्ब ८ करोड रुपैंया बराबरको बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
आर्थिका वर्षको ७ महिनामा उक्त कम्पनीको बिमा शुल्क संकलन १० अर्ब ६६ करोड रुपैंया पुगेको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले माघ मसान्तसम्म ६ अर्ब ९४ करोड रुपैंया बराबरको बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । यसैगरी, १४ जीवन बीमा कम्पनीले चालु आवको माघ मसान्तसम्म १ अर्बमाथि साढे ६ अर्ब कम बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।
मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रमा झारिँदै, प्रधानमन्त्रीले अवलोकन गर्ने
ओली पक्षीय नेकपाको संसदीय दलको बैठक आज बस्दै